Umndeni wamabhere: "I-saga enhle kakhulu yomlando eyake yatshelwa" | Izincwadi Zamanje
Umndeni WeBhele Lomgede yincwadi yokuqala yombhali odumile waseMelika uJean Marie Auel. Ishicilelwe ngo-1980, kuyinoveli eyinganekwane yangaphambi komlando, esethwe enkathini yePaleolithic yezwekazi laseYurophu. Ngalo msebenzi wokuqala i-saga yaqala: Izingane zomhlaba, esidayise izigidi zamakhophi emhlabeni jikelele.
Ukulandisa kuveza ubuntwana nobusha bobulingisi be-protagonist yochungechunge, u-Ayla, ohlala kusukela esemncane kakhulu intandane, ngenxa ukuthi isizwe sakhe sanqotshwa Inhlekelele yemvelo. Phakathi kwemigqa, kuchazwa ukuthi le ntombazanyana ikhule kanjani endaweni enobutha, ehluke kakhulu kunendawo eyayijwayele kuyo. Ngo-1986, lo mdlalo waguqulwa waba yifilimu kaMichael Chapman, edlala noDaryl Hannah.
1 Isifinyezo seCave Bear Clan (1980)
2 Ukuhlaziywa kweCave Bear Clan (1980)
2.3 Izethulo ezinembile
3 Imibono yenoveli
4 I-biography yombhali
4.1 Umjaho wezincwadi
4.2 Izincwadi zikaJean Marie Auel
Isifinyezo se- Umndeni WeBhele Lomgede (1980)
ayla uyintombazane ka iminyaka 5 odabuka kuCro-Magnon, ngubani ukuzulazula ezweni elintulayo ngenxa yokuzamazama komhlaba okwesabekayo. Ukuhamba kwakhe efuna indawo ayehlala kuyo - esinyamalele kanye nesizwe sakhe - kumholela ezindaweni ezingaziwa futhi eziyingozi ngokweqile. Ngokungazelelwe, is rammed by a kakhulu umhume wengonyama lokho kumshiya eshona ngenxa yokulimala kanzima.
Ngakolunye uhlangothi, ukuzamazama nakho kudale umonakalo a elinye iqembu lamadoda akudala, zandisile, owayengowakwa Umgede Bear Clan. Kwakudingeka bashiye imihume yabo, bethi babengenwe isiqalekiso semimoya emibi. Njengoba bebaleka bathola intombazane elimele, futhi ngokushesha, u-Iza - inyanga - uzama ukumsindisa.
Ikhambi, i-mog-ur (shaman) yomndeni, iyaqaphela ukuthi intombazanyana imake isikhumba sakho nayo isibonakaliso se-totem, okuyinto yabo eyi- uphawu lwamandla. Wonke umuntu uyabona ukuthi u-Ayla wehluke kanjani; zinamandla futhi ziqinile, kuyilapho yena ezacile futhi ebukeka kahle. Lokhu kudala imibono ephikisanayo emndenini, okuxoxiswana ngayo ekuthatheni isinqumo sokuqhubeka nomkhondo naye, noma ukumyekela ekudalelweni.
Ngaphandle kwezingxabano, U-Iza uqinisekisa uBrun, umholi weqembu, ukuthi ahambe nentombazane, ekhomba - ngokwengxenye - ukuthi uzoba ngaphansi kwakhe. Ukusuka lapho, u-Ayla uzokhula endaweni ehluke kakhulu kweyakhe, ngoba isizwe sakhe sasiyisixhumanisi esisodwa esiphakeme ekuziphendukeleni kwemvelo. Le ntokazi inokukhalipha okukhulu nekhono ngezikhali, ngaphezu kokuxhumana ngokukhipha imisindo, into ebukelwa phansi phakathi kwamaNeanderthal.
Ngaphandle kokulahlwa njalo ngumndeni, U-Ayla uzohlala ekufuneni okungapheli kokwamukelwa. Ukusiza ukuhlanganiswa kwakho, U-Iza umfundisa ulwazi lwakhe njengomelaphi, ayilinganisa ngokushesha, kepha angakwazi ukuyisebenzisa ngoba akanayo i-: "memory of the clan".
Le ntokazi izobhekana nobunzima obuningi, kepha izokwazi ukubunqoba sibonga umoya wakhe onamandla, njengoba evikelwe yi-totem yomhume wasemgedeni.
Umndeni wakwaBhele ...
Ukuhlaziywa Umndeni WeBhele Lomgede (1980)
Kuyinto inoveli okuluhlobo lohlobo inganekwane yomlando, okwenzeka eNhlonhlweni YaseCrimea, etholakala ezwenikazi laseYurophu. Izici zencwadi I-560 páginas, ihlukaniswe Izahluko ezimfishane ezingama-28, utshele umbhali owazi kahle umuntu wesithathu. Kuwo wonke amaqhinga, ichaza ubudlelwano phakathi kwezizwe ezimbili zangaphambi komlando "AmaNeanderthal namaCro-Magnons."
Uyintombazane yomdabu waseCro-Magnon futhi cishe iminyaka engu-5 ubudalaubani nguyena kuphela osindile esizweni sakubo. Uyena umlingisi ohamba phambili, zombili zale ncwadi nezesaga sonke. Umbhali umchaza njengentombazane emhloshana enamehlo aluhlaza; izici ezivamile ohlwini lwabo lozalo.
Ungumelaphi wakwaClan webhere lomhume, futhi ngubani onakekela u-Ayla kwazise bamthola elimele kabi. Kancane kancane, uzothatha uCro-Magnon omncane njengendodakazi eyodwa, ngakho-ke uzozama ukumsiza ukuze amanye amalungu ohlanga lwakhe amamukele.
Yi-shaman - noma i-mog-ur - yabahambeli be-Neanderthal, ngubani futhi Umfowabo ka-Iza. Ukhubazekile. Bendawonye nodadewabo, bazomnakekela u-Ayla, ngakho ubamba iqhaza ekukhuliseni le ntokazi.
Ngaphakathi kokulandisa, izinhlamvu ezahlukahlukene kakhulu zifakiwe, phakathi kwazo ivelele: Brun (inhloko yomndeni) noBroud (Indodana kaBrun). Amanye amagama nawo avelele, njenge amagilebhisi, I-WHO indodakazi u-Iza futhi uzogcina ekhula njengodadewabo ka-Ayla. Indaba izoveza amagama abanye abalingiswa abanjengo: Aba noDurc, ababaluleke kakhulu empilweni ye-protagonist.
Yize kuyicebo eliqanjiwe, i-literata icubungula imininingwane ethembekile kulezi zinhlobo ezingezansi zohlobo Homo, okuye kwaba ibhalwe yi-paleontologists iminyaka. Ngakho-ke, umbhalo wethula izici eziningi zomlando nezolwazi yalezi zinhlanga ezimbili, phakathi kwazo: amasu abo okuzingela, amasiko, kanye nezincazelo eziningiliziwe mayelana nezici zabo zomzimba.
Umndeni WeBhele Lomgede ube nezigidi zabafundi emhlabeni wonke, kuphela ku- iwebhu amaphesenti ayo okwamukelwa angaphezu kwe-90%. Abaningi bakubheka njenge: "I-saga enhle kakhulu yomlando eyake yatshelwa". Ngokwengxenye yayo, kungxenyekazi ye-Amazon lo mbhalo unesilinganiso esingu-4,5 / 5; lapho ngaphezulu kwama-70% anikeze izinkanyezi ezi-5 encwadini, futhi kuphela ama-6% ayilinganise ngezingu-3 noma ngaphansi.
UJean Marie Untinen wazalelwa eChicago (e-Illinois), ngoFebhuwari 18, 1936. Uyindodakazi yesibili yombhangqwana waseMelika onozalo lwaseFinland; unina: UMartha Wirtanen; noyise: UNeil Solomon Untinen, umdwebi wendlu. Ngo-1954, washada noRay Bernard Auel futhi eminyakeni eyisikhombisa kamuva base benalo iqembu elikhulu lomndeni elinamalungu ayisikhombisa, lo mbhangqwana kanye nowabo Amadodana amahlanu.
Ngenxa ye-IQ yakhe ephezulu, wajoyina iMensa, inhlangano yomhlaba wonke yabaphiwe. Ngemuva kokuqeda ibanga eliphakeme ebusuku, wafunda ePortland State University nase-University of Portland. Uthole iziqu ezimbili zokuhlonishwa eMt.Vernon College nase-University of Maine. Lapho eneminyaka engama-40, wathola i-MBA e-University of Portland.
Ekupheleni kweyunivesithi, uJean Marie uthathe isinqumo sokungena ezincwadini, Ngalokhu, inqubo yophenyo ku-Ice Age yaqala. Ngemuva kwesikhathi eside semibhalo ebhalwe phansi emlandweni nangezifundo eziningi zokusinda, wanquma ukudala isaga yonke, esikhundleni sencwadi eyodwa. Isitolimende sokuqala kwaba: Umndeni WeBhele Lomgede (1980), eyaba yimpumelelo enkulu.
Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, umbhalo waseMelika ushicilele ukulandelana oku-5 ukuqedela uchungechunge, alubize ngesihloko esithi: Izingane zomhlaba. Lezi zinoveli zibekwe ngaphambi komlando waseYurophu, ezichaza ukuvela kwezinhlanga ezimbili zamadoda: amaNeanderthal neCro-Magnons, kanye nokuxhumana okungenzeka kube khona. Kulinganiselwa ukuthi sekuthengiswe amakhophi angaphezu kwezigidi ezingama-45 emhlabeni jikelele
Izincwadi zikaJean Marie Auel
Saga Izingane zomhlaba
Umndeni WeBhele Lomgede (1980)
Isigodi samahhashi (1982)
Abazingeli BamaMammoth (1985)
Amathafa Ezokuthutha (1990)
Izindawo zokukhosela zamatshe (2002)
Izwe lemihume enopende (2011)
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » Umndeni WeBhele Lomgede
Isikhumulo SaseBerna González. Ingxoxo nombhali we-El pozo